नेप्से परिसूचक २४ दशमलव २ अङ्कले गिरावट
यस दिन शेयर बजार १ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २४ दशमलव २० अङ्क घटेको हो । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ५९ प्रतिशत घटेर ३ सय ४७ दशमलव ९३ अङ्क पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ४९ दशमलव ९८ अङ्कले वृद्धि
बुधवार शेयर बजारमा ३ प्रतिशतको वृद्धि देखापरेको छ । परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा ३ दशमलव ४१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस दिन ‘अन्य’ समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक उच्च अङ्कले बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक बढ्न टेवा पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक ४७ दशमलव ७९ अङ्कले वृद्धि
दिनभरिमा शेयर बजार ४७ दशमलव ७९ अङ्क बढेको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम ७५ प्रतिशत बढेको हो ।सो दिन कारोबार रकम रू. ७५ करोड ८४ लाखले बढेर रू. १ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १७ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक४ दशमलव ९६ अङ्कले वृद्धि
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक ४ दशमलव ९६ अङ्क बढी हो । बिहीवार बजार बढेपनि कारोबार रकममा भने कमी देखिएको छ ।
नेप्से परिसूचक ३७ दशमलव ८५ अङ्कले वृद्धि
मङ्गलवार नेप्से परिसूचकमा निकै उतार चढाव पछि बजार बढेर बन्द भएको हो । यस दिन परिसूचकमा १ सय १ अङ्कको उतारचढाव देखिएको हो । बैङ्किङ समूहको परिसूचक २ दशमलव ९७ प्रतिशत बढेको छ । साथै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक १ दशमलव ९७ प्रतिशत...
नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ८५ अङ्कले गिरावट
दिनभरिमा शेयर बजार १६ दशमलव ८५ अङ्क घटेर १ हजार ३ सय ४१ दशमलव ५६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सो दिन कारोबार रकम रू. ३२ करोड ७७ लाखले बढेर रू. ४१ करोड ९६ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण घटेर रू. १५ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ४ दशमलव शून्य ७ अङ्कले वृद्धि
दिनभरिमा शेयर बजार ४ दशमलव शून्य ७ अङ्क बढेर १ हजार ३ सय ५८ दशमलव ४१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सो दिन कारोबार रकम रू. १३ करोड ७१ लाखले बढेर रू. ७४ करोड ७३ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १५ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ६१ अङ्कले वृद्धि
नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ । शेयर बजार १२ दशमलव ६१ अङ्क बढेर १ हजार ३ सय २९ दशमलव ४१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सो दिन कारोबार रकम न्यून प्रतिशतले बढेर रू. ४१ करोड ११ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १४ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक १७ दशमलव ५१ अङ्कले वृद्धि
यस दिन नेप्से परिसूचक १ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ । परिसूचक बढेपनि यसदिन कारोबार रकम भने बढ्न सकेन । अघिल्लो दिनको तुलनामा सो दिन कारोबार रकम रू. २२ करोड ४० लाख घटेर रू. ३२ करोड ५ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १४ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ५४ अंकले गिरावट
मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १ सय ३७ कम्पनीमध्ये ३६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, ८२ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ भने १९ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।विकास बैङ्क र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक क्रमशः शून्य दशमलव १९ प्रतिशत ...
नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ३८अङ्कले घट्यो
यस दिन नेप्सेले कारोवार शुरू भएको आधा घण्टामा यसको पहिलो प्रतिरोध विन्दु काटेर १ हजार ३ सय ९४ विन्दुमा पुगेको थियो । अघिल्लो व्यापार दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम २२ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढेको हो । कारोबारको शुरूवातमा खरीदकर्ताहरु सक्रिय रहेपनि मध्यान्हमा...
नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ५० अङ्कले वृद्धि
आइतवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात २५ दशमलव ५० अङ्कले बढेर १ हजार ३ सय ६९ दशमलव ३५ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन बढिरहेको बजारको प्रवृत्ति हेर्दा नेप्से परिसूचकले प्रथम प्रतिरोध १ हजार ३ सय ८० विन्दुमा र दोस्रो प्रतिरोध १ हजार ४ सयमा पाउने सम्भावना देखाउँछ ।
नेप्से परिसूचक २७ दशमलब ०५ अंकले वृद्धि
यस दिन परिसूचक २ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन कारोबार रकम रू. १३ करोड ६९ ले बढेर रू. ६५ करोड ७१ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १५ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स २ दशमलव ३५ प्रतिशत बढेर २ सय ९२ दशमलव ५२ अङ्क पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक ४ दशमलव शून्य १ अङ्कले घट्यो
मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ । सो दिन होटल र विकास बैङ्क समूह बाहेक कारोबारमा आएका बाँकी समूहहरुको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको हो । यस दिन परिसूचक ४ दशमलव शून्य १ अङ्कले घटेर १ हजार २ सय ७४ दशमलव ९७ विन्दुमा पुगेको हो ।
नेप्से परिसूचक ६३ दशमलव २३ अङ्कले बढ्यो
बुधबार शेयर बजार ४ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा समूह, जलविद्युत र बैङ्किङ समूहको परिसुचक उच्चदरले बढेको छ । सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक उकालो लागेको हो । यस दिन परिसूचक ६३ दशमलव २३ अङ्कले बढेर १ हजार ३ ....
नेप्से परिसूचक एकैदिनमा ६५ दशमलव ४४ अङ्कले घट्यो
सोमवार नेप्से ४ दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको हो । यस दिन परिसूचक ६५ दशमलव ४४ अङ्क घटेर १ हजार ३ सय ९ दशमलव ७० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । कारोबार रकम भने न्यून प्रतिशतले बढेको छ ।
नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ४७ अङ्कले गिरावट
बिहीवार नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ४७ अङ्कले घटेको हो । यस दिन परिसूचक १ हजार ३ सय ५७ को टेवा विन्दुमा पुगेर सुधारिन थालेको थियो । यस दिन परिसूचक १ दशमलव ५४ प्रतिशत घटेर १ हजार ३ सय ७५ दशमलव १४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो ।
नेप्से परिसूचक ३६ दशमलव ३८ अङ्कले घट्यो
पहिलो कारोबारदेखि ओरालो लागेको बजार अन्त्यमा २ दशमलव ५४ प्रतिशत घटेर १ हजार ३ सय ९६ विन्दुमा झरेर बन्द भएको हो । बुधबार परिसूचक ३६ दशमलव ३८ अङ्क घटेको हो । यस दिन नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनी मध्ये जम्मा ९ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेको छ ...
नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ९६ अंकले घट्यो
सोमवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत घटेको छ । परिसूचक घटेपनि कारोबार रकममा भने ४४ दशमलव ५४ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । सो दिन शेयर बजार ७ दशमलव ९६ प्रतिशत घटेर १ हजार ४ सय ५७ दशमलव ८८ बिन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ३ दशमलव २८ अङ्कले वृद्धि
१ हजार ४ सय ६२ विन्दुदेखि शुरू भएको नेप्से ३ दशमलव २८ अङ्कले बढेर परिसूचक १ हजार ४ सय ६५ दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेको छ । आइतवार नेप्से शून्य दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएका विकास बैङ्क, जलविद्युत र वित्त कम्पनी बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से उकालो लागेको हो ।
नेप्से परिसूचक ३ दशमलव शून्य ५ अङ्कले घट्यो
मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २१ प्रतिशत घटेको छ । सो दिन परिसूचक ३ दशमलव शून्य ५ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय ६३ दशमलव शून्य ४ बिन्दुमा पुगेको छ । मङ्गलवार नेप्सेमा कारोबार रकम रू. २४ करोड ६२ लाखले घटेर रू. ३४ करोड २५ लाख पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ६८ अंकले गिरावट
साताको अन्तिम दिनको व्यापारमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २५ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन बजारमा निकै उतार चढाव देखापरेको शेयर बजार ३ दशमलव ६८ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ५४ दशमलव १४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । परिसूचक घटेपनि कारोबार रकममा भने न्यून सुधार देखिएको छ ।
नेप्सेमा न्यून सुधार, परिसूचक ५ दशमलव ६२ अङ्कले बढ्यो
बुधवार परिसूचक ५ दशमलव ६२ अङ्क बढेर १ हजार ४ सय १३ दशमलव १५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्सेमा म्यानुयल कारोबार सहित कुल काराबार रकम रू.४६ करोड २६ लाख पुगेको छ । यस दिन कुल कारोबार रकम भने रू. १३ करोडले घटेको हो ।
नेप्से निरन्तर ओरालो लाग्दै, परिसूचक २५ दशमलव शून्य ४ अङ्कले घट्यो
मङ्गलवार शेयर बजारमा निकै उच्च उतारचढाव देखापरेको छ । यस दिन परिसूचक २५ दशमलव शून्य ४ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ७ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम भने बढेर रू. ५९ करोड ५३ लाख पुगेको छ कुल बजार पूँजीकरण रू. १५ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ ।
नेप्से आठ महिना यताकै न्युन बिन्दुमा
हालसम्मको उचाईबाट घट्ने क्रममा रहेको नेप्सेले २३ प्रतिशत अंक गुमाइ सकेको छ । सामान्यतया बजारमा २० प्रतिशतले सुचक वा मूल्य बढ्दा बुलिश ट्रेण्ड सुरु भएको र २० प्रतिशतले नै सूचक वा मूल्य घट्दा वियरिश ट्रेण्ड सुरु भएको मानिन्छ । हालसम्मकै उचाइ १८८१ बाट सोमवार १४३२ मा आइपुगेको नेप्सेले चार सय ४९ अङ्क (२३ प्रतिशत) गुमाइसकेको छ ।
नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ३६ अङ्कले घट्यो
बुधवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ । दिनभरीको व्यापारमा परिसूचक २५ दशमलव ३६ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ७० दशमलव ६३ बिन्दुमा पुगेको हो । बुधवार व्यापार समूह र होटल समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ ।
नेप्से परिसूचक १८ दशमलव ८९ अङ्कले घट्यो
मङ्गलवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ । दिनभरीको व्यापारमा परिसूचक १८ दशमलव ८९ अङ्कले घटेर १ हजार ४ सय ९५ दशमलव ९९ बिन्दुमा पुगेको हो । यस दिन १ सय ३८ कम्पनीको ४ हजार ८ सय ८ पटकको व्यापारबाट ७ लाख २३ हजार ७ सय ४६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
शेयर बजार २१ दशमलव ८८ अङ्कले घट्यो
साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ८८ अङ्कले घटेर १ हजार ५ सय २२ दशमलव ८० विन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. २० करोड १५ लाखले घटेर रू. ४० करोड ५५ लाख पुगेको छ । यस दिन १ सय ४१ कम्पनीको ३ हजार ८ सय १९ पटकको व्यापारबाट ७ लाख ७ सय ३६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
नेप्से परिसूचक ९ दशमलव २२ अङ्कले घट्यो
साताको अन्तिम दिन शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ । परिसूचक घटेपछि कारोबार रकम भने १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. ९ करोड ३७ लाखले बढेर रू. ६० करोड २५ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १७ खर्ब १८ अर्ब पुगेको हो । बिहीवार नेप्से परिसूचक शून्य दशलमव ५९ प्रतिशतले घटेको छ । केही समय उतार चढावमा रहेको बजार पहिलो ४० मिनेट देखि ओरालो लाग्न थालेको थियो ।